Radio Kailali आँखा रोग विशेषज्ञ भन्छन्, ‘प्रविधि र प्रदूषणले आँखाको ज्योति गुम्दैछ’
२१ असोज, काठमाण्डौ
आजभोलि मोवाइल, ल्यापटप, कम्प्युटर, टेलिभिजनसँग हामी एकाकार भइरहेका छौं । अर्कोतिर धुलो/धूँवाको चपेटामा परिरहेका छौं । यसको अनेकन साइड इफेक्ट छन् । त्यसमध्ये पनि आँखामा यसको सोझो असर परिरहेको छ । तपाईंरहामीलाई थाहा छ, आँखा अति संवेदनशिल अंग हो । जब आँखाको दृष्टि गुम्छ, संसार अध्याँरो हुन्छ । हाम्रो दिनचर्या पुरै प्रभावित हुन्छ । आँखामा आउने सानो समस्याले पनि विकराल रुप लिन सक्छ । त्यसैले यसको उचित स्याहार जरुरी हुन्छ । चोटपटक लागेर मात्र नभई अन्य विभिन्न कारण आँखा खराव हुन्छ । आँखामा कसरी खराबी आउँछ रु त्यसका संकेतहरु के हुन् ? यस सम्बन्धमा हामीले आँखा रोग विशेषज्ञ शैलेश प्रधानसँग प्रश्नोत्तर गरेका छौं ।
मधुमेहले कसरी आँखामा असर पुर्‍याउँछ ? र
आँखामा विभिन्न नशाहरु हुन्छन् । त्यही नशाले नै आँखालाई सन्तुलन राख्ने काम गर्छ । त्यस्ता नशामा पानीको मात्रा तलमाथि भयो भने जलविन्दु हुन जान्छ । जलविन्दु नशाको समस्या हो । फेरी जलविन्दुले आँखाको अप्टीकल नर्भलाई ड्यामेज गर्दै लैजान्छ । जसले गर्दा आँखामा अतिरिक्त चाप पर्छ । यस्तो अवस्थामा मानिस पूर्ण रुपमा अन्धो पनि हुन सक्छ । यसरी गुमेको ज्योतिको उपचार सम्भव छैन । त्यसैले जलविन्दु भएको अवस्थामै राम्रोसँग उपचार गर्न जरुरी हुन्छ ।
के कारणले आँखा रातो हुन्छ रु यो कति खतरनाक छ ?
अहिले कम्युटर, टेलिभिजन, मोवाइलको स्क्रिनले पनि आँखालाई क्षति पुर्‍याइरहेको छ ? यसले कसरी असर गर्छ ? ​​​​​​​
वातवरणीय प्रदूषण, खासगरी धुलो/धूँवाको असर कस्तो हुन्छ ?
शारीरिक रोग वा कमजोरीले पनि आँखामा असर गर्छ ? ​​​​​​​
क्षयरोग टिविको समस्याले पनि आँखालाई समस्या पार्छ । विशेष गरि फोक्सोमा हुने टिविले आँखामा बढी असर पुर्‍याइरहेको हुन्छ । त्यस्तै, औषधीलेसमेत आँखामा ठूलो असर पार्छ । त्यसैले वाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक औषधीको सेवन गर्नु हुँदैन । टाक्सीन्स हुने खालका औषधीले आँखालाई बढी असर पुर्‍याउने गर्छ ।